Nandiso fanantenana ahy ny AT&T tamin'ity faran'ny herinandro ity, saingy ny mpiasan'izy ireo dia TSY | Martech Zone
Nandiso fanantenana ahy ny AT&T tamin'ity faran'ny herinandro ity, fa ny mpiasan'izy ireo kosa tsy
Talata, Janoary 16, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Oh AT&T. Fotoana sasany tamin'ny Alahady nandritra ny andro dia very ny DSL aho. Rehefa tonga tany an-trano aho ny alahady alina, dia niantso ny laharan'ny mpanohana azy ireo aho. Eto no manomboka ny fahafinaretana. Manana rafitra fampihetseham-peo ao amin'ny AT&T izy ireo. Tsy azoko lazaina aminao ny hadalako nahatonga ahy hahatsapa feo amin'ny ilany izay novokarin'ny solosaina tamin'ny fiovan'ny hafanam-po tamin'ny feon'izy ireo. Aleoko tsindrio ny bokotra, saingy tsy safidy io.
Voalohany, hanontany ny rafitra raha mila fanampiana en Espanol aho. Na dia alaim-panahy hamaly aza aho dia tsy namaly. Manontany tena aho hoe maninona izy ireo no tsy manontany fotsiny hoe fiteny inona no tadiavinao fanampiana ary asaivo miteny anglisy ianao na Espanol. Mila fotoana kely kokoa noho ny mandalo ny torolàlana rehetra amin'ny fiteny roa.
Isaky ny antso tsirairay dia manontany ny rafitra raha miantso amin'ny laharana niantsoako aho. Tamin'ny fampiasana Caller ID dia nanontany izy ireo raha ilay nomeraon-telefaona. "Eny", hoy ny navaliko ny rafitra.
Ny dokambarotra mihazona dia niresaka momba ny tahan'ny halavirana lavitra izay mety hahaliana ahy, ka hoy aho hoe “Eny” hilazana fa liana aho… nilaza tamiko ny rafitra fa ivelan'ny ora fiasana izany ary mihantona amiko. Ka tsy maintsy niverina niverina aho ary nanomboka indray.
Rehefa avy nanamafy ny nomeraon-telefaona ny olona dia nanontany hoe: "Inona no antsoinao?" ary hiteny aho hoe "DSL tsy mandeha". "Tsara", ilay solosaina mavitrika dia nilaza fa toa maivamaivana izy afaka nandika ny feoko. Avy eo dia halefa any a CSR… Mieritreritra ny ambaratonga 1 aho.
Ny fanontaniana voalohany avy amin'ny CSR? "Isa inona no iantsoanao?". Tsy mino aho fa nandany minitra farany niresahana tamin'ny masinina aho hanamafisana ny isa lazaiko ary ny CSR dia manontany ahy an'io fanontaniana io ihany. Averiko ihany ilay isa ary manamafy aho fa izaho ilay lehilahy tompon'ny kaonty izay iantsoako.
Manampy ahy amin'ny resaka iray izany… nahoana no maninona ianao raha izaho no lehilahy tompon'ny kaonty? Ahoana raha tsy izaho no tompon'ny kaonty ary mandainga aho? Tsy ho fantatrao ny fahasamihafana ka manontany ianao? Misento.
“Inona no olana?”… Averina… ny feo solosaina dia tsy nampita vaovao tamin'ny CSR. Azavaiko izao fa ny kaontiko DSL Pro dia ambany ary tsy mandeha.
“Modem inona no anananao?” Okay, AT&T, novidiko taminao ilay modem… maninona ianao no tsy mbola mahalala an'izany? Akory ny nahafaly azy raha nandre hoe: "Hitako manana ny modem SpeedStream DSL misy jiro 4 eo aloha ianao, azonao atao ve ny milaza amiko izay jiro mirehitra?". Tsy misy vintana toa izany.
Toa tsy maintsy hamafisina ny olana aorian'ny handehanana mamaky ny Router sy manao zavatra fanampiny. Ny CSR dia tsara dia tsara ary na dia 'namindra mafana' ahy tamin'ny ambaratonga manaraka aza izy, nampahafantatra ahy ilay teknisianina manaraka tamin'ny alàlan'ny finday. Ny haitao mpanohana manaraka dia tena sariaka sy feno… nitazomana ny Modem DSL tamina jack hafa izahay hijery izay valiny hijerena izay mety ho olana. Nampihena ny DSL-ko izy mba hahitana raha olana hafainganam-pandeha izany. Navelanay ny resaka niaraka tamiko hevitra hizahako toetra ny modem DSL ao amin'ny tranon'ny mpiara-monina amiko izay manana DSL ihany koa. Hevitra tsara. Nomeny ahy ny nomeraon'ny tapakila hijerena ahy ary hiantso azy ireo indray.
Notsapaiko tamin'ny mpifanolobodirindrina amiko ilay modem ary nahazo mari-pamantarana iray segondra aho. Whew! Tokony ho ny tsipika.
Taty aoriana iny alina iny dia nihazakazaka nankany amin'ny Starbucks aho mba hahazo fifandraisana tsy misy tariby ary tena manandrana miresaka amin'ny alàlan'ny fanohanana. Nanamaivana ahy izany fa tsy nila niresaka tamin'ny feon'ny solosaina aho, saingy mbola tsy maintsy nandalo antsipirian'ny kaonty maromaro sy fanazavana aho na dia nanokatra ny Isa Tapakilanay aza aho. Izy ireo no mitondra ny tapakila ary manendry fotoana hahafahan'ny teknisianina iray mivoaka avy ao amin'ny ASI Line Department. Ny alatsinainy dia mivoaka ilay teknisianina mpandahatra ny laharana, manamarina ny tsipika ary milaza amiko fa tsara izany. Ary ravina.
Marina izany. Tsy maintsy miverina miantso aho, miresaka amin'ny feon'ny solosaina, miresaka amin'ny CSR, ary mifandray amin'ny departemantan'ny tsipika mba hanangana fotoana hisian'ny teknisianina DSL hivoaka. Tsy afaka mivoaka eo noho eo izy ireo, tsy maintsy mandahatra izany mandritra ny iray andro. Arrgh. Voalahatra ny talata teo anelanelan'ny 8 maraina sy 5 hariva aho. Fandaharam-potoana tsara, eh? Tsy maninona… Ao an-trano aho miaraka amin'ny ankizy marary 2 androany, manam-potoana be aho.
Androany (talata), nivoaka ny teknisiana DSL ary tao anatin'ny minitra vitsy dia nampiakariny aho ary mihazakazaka modem vaovao. Miampanga ahy ny fitsidihana sy ny modem, vola mitentina 120 $.
$ 120 hahazoana ny DSL hiverina dia tena fanamaivanana, saingy raha ny fijeriko ny marketing dia tsy misy dikany izany. Manontany tena aho hoe firy ny mpanjifa DSL hafa no nanatsara ny kaontiny niaraka tamin'ny AT&T ary nijanona niaraka tamin'izy ireo nandritra ny 4 taona. Averin'izy ireo ilay modem rehefa nisoratra anarana voalohany ianao… fa tsy hanome freebie ahy aorian'ny niarahako tamin'izy ireo nandritra ny 4 taona? Izany ny fankasitrahan'ny mpanjifa moana. Milaza amiko izany fa te-hanome nickel ahy ianao ary na dia efa tsy nivadika aza aho nandritra ny taona maro. Manana serivisy telefaona miaraka amin'izy ireo koa aho.
Ity kosa ny hevitro momba izany tsy fitovizan-kevitra izany. Ny olona tokan-tena rehetra nahafinaritra ahy niara-niasa tamin'ity olana ity dia mahafinaritra. Ny CSR tokana tsirairay dia nahalala fomba, sariaka ary tia olona. Niresaka tamin'ny solontena iray tao St. Louis aho ary samy niresaka momba ny fankasitrahana izahay noho ny fakana ankeriny tany an-toerana ka nahatonga ireo zazalahy niverina tamin'ny ray aman-dreniny.
Ny nahasosotra sy nahomby tamin'ity olana ity dia ny orinasa, ny fizotrany ary ny teknolojia - tsy ny olona velively. Feno fankasitrahana sy hatsaram-panahy foana aho isaky ny olona mpanohana niresaka tamiko… Fantatro fa tsy izy ireo no nanapa-kevitra ny handany olona an-tapitrisany amin'ny rafitry ny feo moana. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia nifona noho ny tsy fanelingelenana ary namindra ahy ho any amin'ny olona manaraka araka ny fizotrany… saingy mampijaly ny fizotrany!
Ny fanontaniana: Maninona raha dinihina haingana ny firaketana ny mpanjifa ary asio lanja ny tsy fivadihan'izy ireo ary apetraho mifanaraka amin'izany ny haavon'ny fanohananao? Raha nandinika ny kaontiko ny AT&T dia tsy nahita fitarainana na olana tao anatin'ny 4 taona izy ireo niaraka tamin'ny fanavaozana iray sy tantaram-bola mivaingana. Moa ve tsy mendrika ny teknisiana ambony DSL alefa avy hatrany, tsy andoavam-bola, ny famahana ny olana amin'ny rafitra, ary ny fametrahana modem vaovao? Heveriko izany… fa misy olona ao amin'ny AT&T mazava ho azy tsy mankasitraka.
Te hampahafantatra anareo rehetra aho fa tapaka ny tazo ny zanako vavy androany ary miverina mitsangana izy. Nisy a famaranana lehibe fa tsy hasiako resaka amin'ny antsipiriany, fa faly aho fa salama sy mihinana indray.
Izaho sy ny zanako lahy dia samy miady amin'ity iray ity, fa ny fitazonana ilay mpanasa lamba sy ny fanadiovan-tanana dia tena nanampy tokoa, heveriko fa hahavita azy isika. Misaotra an'ireo olona nanolo-tena sy nandefa mailaka na naneho hevitra. Mahatalanjona ny hatsaram-panahinao ary tiako be izany. Miasa amin'ny mpampiasa lehibe aho nefa tsy maintsy miaiky fa olona iray ihany no nantsoina na nandefa mailaka avy tany… fa maro aminareo, ry mpamaham-bolongana namako, no nanatratra izao tontolo izao.
Wow - tena mamono ahy izany! Misaotra anao.
Jan 17, 2007 ao amin'ny 2: 08 AM
Toa hadalana tokoa ny rafitry ny feo mandeha ho azy. Tsy manana an'izany isika eto ka faly aho. Ny bokotra fanaovan-gazety dia tsara indrindra!
Na izany aza, mitsentsitra ny serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny ankamaroan'ny toerana eto. Antsasaky ny fotoana tsy azon'izy ireo ny olanao. Ny olan'ny indostrian'ny BPO!
Jan 17, 2007 ao amin'ny 10: 24 AM
Heveriko fa izany no mahatonga ny ATT ho iray amin'ireo ratsy indrindra amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa… http://www.crmlowdown.com/2006/11/the_10_best_and.html
17 Jan 2007 amin'ny 12:38 PM
Misaotra an'ilay fanoharana, Doug. Raha ny fahitako azy dia izao no mitranga rehefa milaza amin'ny tsara tarehy isika
fa ampiasao fotsiny ho toy ny paikadin'ny mpanjifantsika. Tsy misy famerenana ny mikasika ny mpanjifa, tsy misy eritreritra amin'ny alàlan'ny onjan'ny
fifandraisana. Antsoiko hoe "Fihetseham-po tsy mitongilana CRM."
Faly mihaino ny zanakao vavy fa salama kokoa!
17 Jan 2007 amin'ny 3:38 PM
Nahita izany aho tamin'ny Ilay mpanjifa
Apr 6, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Nahazo toky aho fa misy DSL any amin'ny faritra misy ahy (efa mpanjifa tsy nivadika nandritra ny 10 taona). Nanomboka tamin'ny andro voalohany dia tsy maintsy nidina ambany avy amin'ny 3.0Mbps (29.95) aho satria “tsy zakan'ny tsipika ny hafainganana noho ny halaviran'ny biraon'ny DSL - 6,500 1.5ft). Zavatra tsy noraharahain'ny mpivarotra tamiko. Indray mandeha amin'ny 19.95 Mbps (1.5 isam-bolana) dia nanohy nanapaka tsy kisendrasendra sy tamin'ny fotoana ratsy indrindra ny tsipika. Ny fihodinana fahatelo, ny teknolojia AT&T dia nampidina ny serivisiko ho antsasaky ny 928 Mbps ka hatramin'ny XNUMXbps (fa tsy ny vola isam-bolana) - mba hitazomana tsipika tsy miovaova - Tsy misy vintana indray
Nofoanako ny serivisiko, tafahitsoka amin'ny saram-panafoanana $ 200 aho satria ny olona mpivarotra dia nanome daty "fanombohana" hafa ho an'ny fotoam-pitsarana 30 noho ny "teknolojia" nataon'izy ireo. Taorian'ny ora 5 nitantarako ny momba ahy taminà mpiasa 11 samihafa (any India) ary nanana naoty sy anarana hanaporofoana ny hevitro dia tsy nety nihaino ahy intsony izy ireo. Ireo teknisianina 8 niresaka tamiko dia nilaza tamiko foana fa “tsy milamina ny tsipika.”
Teny filamatra vaovao ??? "AT&T - orinasa TSY MISY AN'NY BUSINESS KOMUNIKA."